Wikipedia:Maqaal Cusub - Wikipedia
Maqaalada Cusub Ee Wikipedia
Maqaal Cusub Waa maqaallo ay ku jiran ama gaar ah mana gaari karaan maqaalada xulka ah umana diyaarsana in ay noqdaan xul sababtoo ah waa kuwa kooban. Hadii ay gaarto Kaasoo laga eegayo dhanka tayada markaasna lagu guuleeysto habka sharaxaada maqaalada cusub, waxay ka mid noqon kartaa maqaalada cusub. (Natiijada wadahadalka waxay bedeli kartaa liiska)
Bogga hore waxaa la soo dhigaa oo kaliya 9 maqaal kaasoo ah qayb ka mid ah 8,281 maqaal ee wikipedia guud ahaan ugu jirta. kaasoo ka dhigan 1 ! maqaal 920kiiba ee halkaan ku jirta. Maqaaladaan Waxeey ku guuleeysteen habka maqaalada cusub: si kooban loona qoray hab wanaagsan, waana mid sugan xigasho leh. waxaa laga yaabaa maqaalada csusb in ay noqon waayaan mid koobta maqaalada xulka ah, laakiin waxaa laga doonayaa in aan laga tagin wax kasto oo muhim ah.
Hawsha u aqoonsiga maqaal 'Cusub' way ka fududahay maqaal xul ah. hadii lagu arko ama la qoray maqaal uu kulan sado habka, waxaad ku dari kartaa bogga Sharaxaada si dib loogu noqdo, hadii ay ku guuleeysato ku dar liskaan. waxaa dhaceeysa in laga tirtiro maqaalka hadii uu kor ukaco heerka maqaalka xulka ah ama hadii aaneey buuxin habka: gudagale gasto ayaa smayn kara tusaale ahaan tirtirista maqaalada. hadii uu maqaalku sharaxaada ku guuleeysan waayo ama hadii laga saaro liiska, waa in lagu sheegaa sababta bogga wadahadalka ee maqaalka taasoo ah inaad wax ka bedesho hormarisidna si ay u gaarto heerka loogu talo galay. waxaa lagu xalin karaa waxyaabaha lagu kala aragti duwanyahay Habayn.
Waa Maxaay Maqaal Cusub?
Sharaxaada Maqaalada Cusub
Habaynta maqaalada cusub
Sidoo kale eeg :
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Maqaal_Cusub&oldid=200349"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Abriil 2020, marka ee eheed 20:58.